Tirooyinka Gaadiidka Madaarka Fraport ee ugu dambeeyay Sebtember 2021: Wanaagsan!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Tirooyinka Gaadiidka Madaarka Fraport ee ugu dambeeyay Sebtember 2021: Wanaagsan!
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • News • War-Saxaafadeed • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Gegida Diyaaradaha ee Frankfurt (FRA) wuxuu soo dhoweeyey 3.1 milyan oo rakaab ah bishii Sebtember 2021-taasoo ka dhigan koror 169.1 boqolkiiba ah sannad-sannadka, in kasta oo la barbar dhigo bishii Sebtember 2020 oo aad u daciif ahayd.
Kobaca rakaabka ayaa sii waday in inta badan ay wadeen gaadiidka fasaxa. Bisha warbixinta, tirooyinka rakaabka ee FRA-iyadoo wali lagu dhajinayo 54.0 boqolkiiba hoos u dhac marka la barbar dhigo Sebtember 2019-ayaa mar kale gaadhay ku dhawaad ​​kala bar heerkii hore ee masiibada, sidaasna lagu sii wado isbeddelka wanaagsan ee la dejiyay Ogosto 2021.
Intii lagu jiray sagaalkii bilood ee ugu horreeyay ee 2021, FRA waxay u adeegtay wadar ahaan 15.8 milyan oo rakaab ah. Tani waxay dhalisay hoos u dhac boqolkiiba 2.2 marka la barbardhigo isla muddadii sanadkii hore, oo ka soo horjeeday hoos u dhac 70.8 boqolkiiba marka la barbar dhigo sagaalkii bilood ee ugu horreeyay sannadka 2019.
Wax-soo-saarka xamuulka (airfreight + airmail) ayaa sii waday kobacii xoogganaa bishii Sebtember 2021, taasoo si muuqata kor ugu kacday boqolkiiba 13.4 sannad-sannadka ilaa 188,177 metrik ton.
Marka la barbardhigo Sebtember 2019, culeyska xamuulka ayaa helay 7.7 boqolkiiba bishii warbixinta. Dhaqdhaqaaqyada diyaaraduhu waxay kor u kaceen boqolkiiba 66.1 sanadkiiba ilaa 28,135 duulimaad iyo soo degitaan. Miisaannada qaadista ee ugu sarreeya (MTOW) ayaa kordhay 61.5 boqolkiiba ilaa ku dhawaad ​​1.8 milyan oo metrik ton.
Bishii Sebtember 2021, garoomada diyaaradaha ee Fraport ee faylalka tacliimeed ee caalamiga ah ayaa inta badan sii waday inay soo sheegaan waxqabadka wanaagsan ee taraafikada. Marka laga reebo Gegida Diyaaradaha ee Xi'an (XIY) ee Shiinaha, garoomada diyaaradaha ee kooxda Fraport Group waxay gaareen kobac weyn. Qaar ka mid ah garoomada diyaaradaha ee kooxda, gaadiidka rakaabka ayaa kor u kacay in ka badan boqolkiiba boqol sannadkiiba-in kasta oo la barbardhigay heerarkii taraafikada oo aad loo yareeyey bishii Sebtember 100. Marka la barbardhigo masiibo kahor Sebtember 2020, inta badan garoomada diyaaradaha ee Fraport Group-ka adduunka ayaa weli diiwaangashan tirooyinka rakaabka hoose. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah garoomada diyaaradaha ee u adeega meelaha dalxiiska ee aadka loo dalbado-sida garoomada Giriigga ama Madaarka Antalya ee ku yaal Riviera-ka Turkiga-waxay arkeen in taraafikada ay dib ugu soo laabatay ku dhawaad ​​2019 boqolkiiba heerarkii hore ee dhibaatada bishii la soo sheegay (marka la barbar dhigo Sebtember 80).
Gegida Diyaaradaha ee Ljubljana (LJU) oo ku taal caasimadda Slovenia ayaa soo dhoweysay 65,133 rakaab ah bishii Sebtember 2021. Garoomada diyaaradaha ee Brazil ee Fortaleza (FOR) iyo Porto Alegre (POA), isku -socodka gaadiidka ayaa kordhay 820,169 rakaab ah. Madaarka Lima ee Peru (LIM) ayaa qaabilay ku dhawaad ​​1.1 milyan oo rakaab ah bishii warbixinta.
Wadarta guud ee garoomada diyaaradaha ee 14 ee Giriigga ayaa kor u kacday ilaa 3.4 milyan oo rakaab ah bishii Sebtember 2021. Xeebta Badda Madow ee Bulgarian, garoomada Twin Star ee Burgas (BOJ) iyo Varna (VAR) ayaa sidoo kale soo sheegay gaadiid aad u sarreeya oo wadar ahaan 328,990 rakaab ah ay u adeegeen . Madaarka Antalya (AYT) ee Turkiga ayaa soo dhoweeyay ilaa 3.8 milyan oo rakaab ah. Madaarka St. Madaarka Xi'an (XIY) ee Shiinaha ayaa duubay wax ka yar 1.9 milyan oo rakaab ah bishii warbixinta.
Soo deg Xogta Gaadiidka (PDF)